अन्धाधुन Info. About. What's This?
यो चलचित्रको पटकथा राघवन, अरिजित विश्वास, पूजा लाधा सुरती, योगेश चन्देकर र हेमन्त एम रावले लेखेका थिए। यो चलचित्रको सम्पादन कार्य सुरतीले गरेकी थिइन् भने केयु मोहननले फोटोग्राफी निर्देशकको भूमिका सम्हालेका थिए। अमित त्रिवेदीले चलचित्रको लागि गीत रचना गरेका थिए र जयदीप साहनीले गीत लेखेका थिए। रफ्तार गिरीश नाकोडले अतिथि सङ्गीतकारको रूपमा शीर्षक गीत लेखेका थिए।
सन् २०१३ मा, रावले राघवनलाई एलएकोर्डर द पियानो ट्युनर, एक अन्धो पियानोवादकको बारेमा सन् २०१० को फ्रान्सेली छोटो चलचित्र हेर्न सुझाव दिएका थिए। राघवनले चलचित्र मनपराए र यसै कथावस्तुमा आधारित स्क्रिप्ट तयार गर्ने निर्णय गरेका थिए। राघवनलाई सम्पर्क गरेपछि र उनीसँग काम गर्न चासो देखाएपछि खुरानालाई मुख्य भूमिकामा चयन गरिएको थियो। यो चलचित्रको मुख्य फोटोग्राफी सन् २०१७ जुनमा सुरु भएको थियो भने सन् २०१८ जुलाई १७ मा समाप्त भएको थियो। चलचित्रलाई पुणेमा ४४ दिन छायाङ्कन गरिएको थियो।
अन्धाधुनलाई भायकम १८ मोसन पिक्चर्सद्वारा नाटकीय रूपमा भारतमा सन् २०१८ अक्टोबर ५ मा आलोचनात्मक प्रशंसाको साथ प्रदर्शित गरिएको थियो। आलोचकहरूले चलचित्रको लेखन, खुराना र तबुको अभिनय प्रदर्शनलाई सराहेका थिए। यो चलचित्रले स्क्रिन पुरस्कार समारोहमा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक र सर्वश्रेष्ठ स्क्रिनप्ले सहित चार पुरस्कार खुरानाका लागि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक र सर्वश्रेष्ठ चलचित्र आलोचक सहित पाँच फिल्मफेयर पुरस्कार जितेको थियो। यसले तीन राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार: हिन्दीमा सर्वश्रेष्ठ फिचर चलचित्र, खुरानाका लागि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, र सर्वश्रेष्ठ स्क्रिनप्ले पनि जितेको थियो। चलचित्र ₹ ३२० मिलियन युएस$४.५ मिलियनको बजेटमा निर्माण भएको थियो र विश्वव्यापी बक्स अफिसमा ₹ ४.५६ बिलियन युएस$६४ मिलियन कमाएको छ।
आकाशले उक्त हत्यालाई प्रहरीमा खबर गर्न खोज्छन्, तर मनोहर एक पुलिस इन्सपेक्टर हो भन्ने कुरा थाहा पाउँछन्। यसैबीच, सिमीले उनको वृद्ध छिमेकी मिसेज डिसा पुलिस अधिकारीसँग प्रमीदको हत्याको बारेमा कुरा गर्दै गरेको सुन्छिन्। सिमीले पछि मिसेज डिसालाई उनीहरूको अपार्टमेन्टको छेउबाट धकेलेर मार्छिन्। आकाशले हत्या देख्छन् तर अज्ञानता जारी राख्न बाध्य हुन्छन्। पछि जब सिमीले उनको पतिको अन्तिम संस्कार पछि विषाक्त भेटीहरू ल्याउँछिन् र बन्दुक निकाल्छिन्, आकाश पियानो बजाउन मद्दतको लागि प्रयोगको रूपमा अन्धोपनलाई नक्कल गरेको स्वीकार्छन्।
आकाशको अन्धोपनमा शंकास्पद छिमेकीको बच्चाले आकाशको दृश्यलाई पूर्ण रूपमा देख्न सक्ने भिडियो रेकर्ड गर्दछ र सोफीलाई देखाउँदछ। सोफी आइपुग्दा, सिमीले उनी र आकाशले यौन सम्पर्क गरिरहेका छन् जस्तो देखाउन चीजहरू मिलाउँदछन्। उग्र निराशापूर्णले भरिएको, सोफीले आकाशलाई छोड्छिन्। जब उनी ब्यूँझन्छन्, उनी सिमीले दिएको औषधिबाट अन्धा भएको महसुस गर्छन्। मनोहर आकाशलाई मार्न उसको घरमा आउँछन्। आकाश मुश्किलले भाग्छन्, तर टेलिफोनको पोलमा लागेर उनी बेहोश हुन्छन्।
अन्धाधुन ३१ अगस्ट २०१८ मा प्रदर्शन हुने कार्यक्रम थियो तर यसको प्रदर्शन ५ अक्टोबरसम्म स्थगित गरिएको थियो; निर्माताहरूले ट्रेलरमा ढिलाइको घोषणा गरेका थिए। राघवनले सुरुमा चलचित्रको ट्रेलरमा केवल ध्वनि समावेश गर्न चाहान्थे किनकि यो अन्धा मान्छेको कहानी हो तर स्टुडियो उनको सुझावमा "चकित" भएको थियो। धेरै छलफल पछि, तिनीहरू ट्रेलरमा सहमत भएका थिए। राघवन ट्रेलरमा "चलचित्रको बारेमा धेरै कुरा दिन चाहँदैनथे" र स्टुडियोले अन्ततः उनको विचारलाई स्वीकार गरेको थियो। ट्रेलर २ सेप्टेम्बर २०१८ मा जारी भएको थियो।
चलचित्र भारतभर ८०० स्क्रिनमा प्रदर्शित भएको थियो, र नेटफ्लिक्समा उपलब्ध छ। यो सन् २०१९ को लस एन्जलसको भारतीय चलचित्र महोत्सवमा प्रदर्शित भएको थियो जहाँ तब्बूलाई सम्मानित गरिएको थियो। अन्धाधुन ३ अप्रिल २०१९ मा चीनमा पियानो प्लेयरको रूपमा प्रदर्शित गरिएको थियो। २८ अगस्ट २०१९ मा, चलचित्र दक्षिण कोरियामा ९० भन्दा बढी स्क्रिनमा प्रदर्शित भएको थियो।